Nezvedu - Zhejiang Leadrive Electric Motor Co, Ltd.
Kushaikwa kwekutenda mumabhizinesi kwakangofanana nekushayikwa kwekutenda muvanhu. Zvakaoma kuzadzisa chikonzero chakakura uye kubudirira kubudirira. Kunyangwe iri bhizimusi Indasitiri zano kana kuronga kwesangano, dzinenge shanduko dzese dzinoenderana nezvakajairika, kutenda kwakajeka uye tsika tsika. Muchokwadi, kumisikidzwa kana shanduko yekutenda kwemakambani inotangwa nevanamuzvinabhizimusi zvichibva pane zvido zvekushandurwa zvine hungwaru uye inoshumira
sekushandurwa kwakasimba kwe.
Pano, iwe unogona kuona kwedu kukura kuita uye kudzidza nezve edu azvino kuitika. Isu tiri zvakare tinodisisa kwazvo kugovana newe Nakidzwa nerakanakisa ruzivo rwekukura pamwechete nevatinoshanda navo pasi rese. Ehe, iwe unogona kuona kwedu mutoro uye basa. Mukutsvaga bhizinesi nevashandi kuti vakure pamwe chete panguva imwe chete, isu tinogara tichitevedzera nzira yekusimudzira budiriro uye tichishingairira kufunga zvemagariro basa, Inoshingairira kugara zvakanaka kwevanhu, kudzoka munharaunda.
Pano, iwe unogona zvakare kuona edu maonero. Isu tinotsvaga zvisina tsarukano "maviri emari, matatu matsva, mashanu, mamirioni "Strategic zvinangwa, kwete chete kuyedza kuwana inoenderera shanduko uye kusimudzira hupfumi hweChina pasi pechinyakare hutsva, asiwo kugovana mikana pamwe nevamwe vavo vepasirese, Gadzira pamwe chete.
Kukosha kunouya kubva mukugadzira! Tinokukoka iwe kuti ugadzire iro ramangwana pamwe chete!
Tarisa pane kuvandudza kwakachengeteka & zvakatipoteredza hushamwari pombi & system uye gadzira kukosha kune vese vanobatika.
Simudza mufananidzo weChina pombi & system indasitiri, iri kambani inogara ichisimukira inotungamira mune ino indasitiri.
Leadrive Core Kukosha
Mhanya bhizinesi neVIRTUE, Tevera kubudirira neZVINHU, Wina kukunda neZVAKAITIKA, Endai foward nezvakanaka MAITO.
Chifananidzo cheshumba chine hunhu hwekuda, rupo, tariro uye chinzvimbo chinogadzirwa semascot zvichibva pane rezodhiac rezita reLeadrive.
Zhejiang Leadrive Magetsi Motor Co, Ltd. Inowanikwa paTaizhou-ane simba kuberekwa guta rehupfumi hwakazvimirira mudunhu reZhejiang, uye kuvimba nehupfumi hwakakura denderedzwa reYangtze Rwizi Delta, Zhejiang Leadrive Electric Motor Co, Ltd. (pano inonzi "tripow mota") ine yakakwirira nzvimbo nzvimbo. KuHuangyan airport ichingove makiromita maviri chete uye chiteshi cheHaimen chiri makiromita gumi kure, kambani inonakidzwa neinyore nyika-mvura- mhepo-kufambisa. Iine ayo matsva manejimendi timu, yemazuva ano manejimendi sisitimu, yemhando yepamusoro vashandi, inogumisa kugadzira zvivakwa, yakakwana yekuyedza michina, ine simba rehunyanzvi simba, rakavimbika chigadzirwa mhando, inoyevedza inogadzira maitiro, akakwana mhando system, yepamusoro R&D chinzvimbo uye nyanzvi yekutengesa timu, Leadrive MOTOR yave nyeredzi iri kusimuka muChina mota indasitiri. Iyo yekutengesa network yakapararira mumatunhu makumi maviri nemaguta munyika yese. Rudzi rwayo rwekufungidzira rwakafadzwa kune wese munhu rave sarudzo yakasarudzika ye cusomers uye yakahwina mukurumbira wakanaka pakati pevashandisi.
Leadrive mota inonyanya kugadzirwa, kutsvagisa uye kutengesa kwemhando dzakasiyana yemotokari. Zvigadzirwa zvaro zvinosanganisira akasiyana akateedzana e3-ph asynchronous motors akadai Y, YE2, YE3, YD, YEJ, YVP uye mamwe akatorwa akakosha mota. Kugamuchira yunifomu yenyika sandards uye nemitengo yemagetsi uye kukwirira kwedenga mumatanho eIEC, zvigadzirwa zvawo zvine zvakanakira kusanganisira kunyatsoshanda, kukwirira kwekutanga torque, yakaderera ruzha nhanho yakadzika vibration, uye yakakwirira rakavimbika. Zvigadzirwa zvakaongororwa kutevedzera CE KUSVIRANA kweEU nyika uye yakave CCC uye CQC yakasimbiswa. Iyo kambani yakawana iyo IS09001 yekudyidzana mhando yemhando inoenderana. Leadrive mota inozvipira pachayo yakagadziriswa optimized mhinduro ye vashandisi mumaindasitiri uye emagetsi kunyorera nekushambadzira -maki yakasarudzika yakasarudzika mota.
Innovation uye kuvimbika ndiyo yedu musimboti. Kugadziriswa uye kuchinjika ndiko mukana wedu. Isu tinovavarira kuve vanomiririra kune Yakagadzirwa muChina muchikamu chemagetsi emagetsi pasirese. Namatira kune pfungwa ye "kubata vatengi nekuvimbika uye kuhwina musika nehunhu" uye kusangana neinogara ichichinja-chinja zvinodiwa nevatengi vese kumba uye aborad, isu vakazvipira kune creat "Leadrive mota" mhando uye voita kuti izive kuChina pamwe kunyika. Nekuvimbika kwedu uye nehungwaru, tinotarisira ramangwana rakajeka pamwechete newe.